Warar - Guri noocee ah ayaa ku habboon qurxinta iyo naqshadeynta tiyaatarka guriga?
Dad badan oo ku waalan filimada iyo muusigga waxay rabaan inay ku rakibaan masrax gaar ah guriga si ay u dareemaan farxadda filimada iyo muusigga wakhti kasta. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira su'aal kale oo qof walba dhibaysa, taasi waa, qol noocee ah ayaa ku habboon tiyaatar gaar loo leeyahay. In kastoo dad badani yiraahdaan qol kasta waxaa lagu rakibi karaa shaneemo gaar loo leeyahay, dadku weli waxay u maleynayaan inay jiri doonto meel ugu fiican. Qol noocee ah ayuu yahay? Maanta, Zhongle Yingyin, oo ah khabiir khabiir ku ah naqshadeynta qurxinta tiyaatarka gaarka loo leeyahay, ayaa ku siin doona hordhac kooban, isagoo rajeynaya inuu ku caawiyo.
Shineemo gaar loo leeyahay ayaa ah qaab dhismeedka shineemo shineemo iyo KTV, oo lagu daray baahiyaha qoyska qaarkood. Wali way ka duwan tahay tiyaatarada dhaqanka iyo KTV-yada. Haddii aad tiyaatar gaar ah ka sameysato qolka fadhiga, qolka waxbarashada, ama qolka jiifka, boosku wuu xadidan yahay tirada kuraasta dadku wey xadidan tahay. Haddii aad rabto in dad badani daawadaan filimada iyo kaafiyada, waxa fiican inaad raadsato meel ballaadhan oo ballaadhan oo lagu rakibo tiyaatar gaar loo leeyahay. Sidaa darteed, haddii dadku haystaan ​​miisaaniyad iyo meel ku filan, waxay u isticmaali karaan qol sidii qol masrax gaar ah oo maqal-muuqaal ah, oo qiyaastii ah 20 mitir laba jibbaaran.
Si kasta oo ay qolku u fiicantahay, naqshadeynta ayaa fure u ah
Tayada shineemo gaar ah kuma xirna oo keliya xulashada qolka, laakiin sidoo kale badanaa waxay la xiriirtaa naqshadeynta iyo qurxinta shineemada gaarka loo leeyahay. Shineemooyinka gaarka loo leeyahay maalmahan iskuma dhafan qalab fudud sidii hore. Injineerro xirfadlayaal maqal iyo muuqaal ah ayaa looga baahan yahay inay naqshadeeyaan oo ay qurxiyaan qolka, sameeyaan daaweyn acoustic ah iyo naqshad bilic leh si loo hubiyo jawiga dadka iyo niyadda ay leeyihiin markay daawanayaan filimada.
Sida magaca ka muuqata, shineemada gaarka loo leeyahay waa shineemo guriga, sidaas darteed qol loo dhigo shineemo gaar ah ayaa ah arrinta ugu horreysa ee ay tahay in qof walba tixgeliyo. Dad badan waxay rabaan saamayn maqal iyo muuqaal oo qumman, sidaa darteed waxay waydiiyaan xirfadlayaal maqal-muuqaal xirfadlayaal ah nooca qolka ugu habboon ee lagu rakibo tiyaatar gaar loo leeyahay. Xaqiiqdii, falanqaynta guud, qol kasta oo qoyska ka mid ah waxaa laga dhisi karaa tiyaatar gaar loo leeyahay. Qolka barashada, qolka jiifka, qolka fadhiga, xitaa qolka hoose, saqafka waa la isticmaali karaa. Si kastaba ha noqotee, haddii dadku leeyihiin shuruudo sare oo loogu talagalay tiyaatarada gaarka loo leeyahay oo ay rabaan inay raacaan saameynta ugu fiican ee maqalka iyo muuqaalka ah, waxaa lagula talinayaa in dadka isticmaala ay qol u goglan karaan si ay u rakibaan tiyaatar gaar loo leeyahay.
Microphone Karaoke Wireless ah, Muuqaalka Miracast, Karaoke Mikrofoonka La qaadan karo, Nidaamka Codka Karaoke,